ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လမ်းလျှောက်သူများ တောင်ငူရောက်ပြီ | ဧရာဝတီ
မေစစ်ပိုင်| January 29, 2013 | Hits:3,363
7 | | ကချင်လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIO) အခြေစိုက်ရာ လိုင်ဇာမြို့ မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ – Steve Tickner / ဧရာဝတီ)
ရန်ကုန်မှ ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာမြို့အထိ ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်သည့် အဖွဲ့သည် ယနေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီတွင် တောင်ငူမြို့ သို့ ရောက်ရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အဖွဲ့ကို တောင်ငူမြို့ပေါ်ရှိ အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးမည်ဟု အသံများ ထွက်ပေါ်နေသော်လည်း လက်ရှိအချိန်အထိ တားမြစ် ဖမ်းဆီးခြင်းများ မရှိသေးကြောင်း ယင်းအဖွဲ့တွင် ပါဝင်လမ်းလျှောက်သည့် ဆရာတော် ဦးရက္ခဝံသက ဆိုသည်။
“အာဏာပိုင်တွေက လာပြီးတားဆီးခြင်း မရှိသေးဘူးဆိုပေမယ့် မြို့အဝင်တည်းက အထူးရဲတပ်ဖွဲ့တွေက လိုက်နေတယ်။ တားဆီးတာရှိလည်း ဖြေရှင်းပြီးတော့ ဆက်သွားမှာပဲ” ဟု ဆရာတော်က ဧရာဝတီသို့ မိန့်သည်။
၎င်းအဖွဲ့အနေဖြင့် တားဆီးမှုများရှိသည့် တိုင်အောင် လိုင်ဇာမြို့သို့ ရောက်သည်အထိ လမ်းလျှောက်မည် ဖြစ်ပြီး တနေ့လျှင် မိုင်၂၀ အထိ ရောက်အောင် လျှောက်မည်ဟု သိရသည်။ လက်ရှိ အဖွဲ့အတွင်း သံဃာတော် ၅ ပါးနှင့် လမ်းလျှောက်သူ ၃၀ ဦး ပါရှိသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်အဖွဲ့သည် တောင်ငူမြို့ပေါ်ရှိ သီရိဥသျှောင် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် တည်းခိုမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်အဖွဲ့အတွက် သီချင်းဆိုကာ အလှူငွေကောက်ခံရန် တောင်ငူမြို့သို့ ယမန်နေ့က ရောက်ရှိခဲ့သည့် “ပန်းရဲ့လမ်း” လူမှုကွန်ယက် အဖွဲ့ဝင်တဦးက “ကျနော်တို့ လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ အတွက် သီချင်းဆိုပြီး အလှူငွေ သွားရှာဖို့ ရောက်သွားတာပါ။ မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကတော့ သီချင်းဆိုတာ ခွင့်ပြုချက် မယူလို့ဆိုပြီး ခေါ်စာပို့တယ်၊ ခံဝန်လက်မှတ်တော့ ထိုးလိုက်ရတယ်” ဟု ပြောသည်။
ပန်းရဲ့လမ်း လူမှုကွန်ယက် အဖွဲ့အနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းလျှောက်သူများကို အလှူငွေများ လှူနိုင်ရန်အတွက် တောင်ငူ မြို့ပေါ်၊ မြို့သစ်နှင့် အုတ်တွင်းမြို့တို့တွင် သီချင်းများဆိုကာ ရန်ပုံငွေများရှာဖွေခဲ့ကြောင်း၊ တောင်ငူမြို့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက သီချင်းဆိုရန် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် ယူရမည်ဟုဆိုကာ ခေါ်စာနှစ်ကြိမ် ပို့ခဲ့ပြီး လာမည့် ၃၁ ရက် နေ့မှသာ မြို့ပေါ်တွင် သီချင်းဆိုခွင့် ပေးမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လိုင်ဇာမြို့အထိ လမ်းလျှောက်ချီတက်မည့် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကို တောင်ငူမြို့အရောက်တွင် ဖမ်းဆီးမည်ဟု မြို့ပေါ် ရပ်ကွက်များတွင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ အမိန့်စာထုတ် ကြေညာသည် ဆိုသည့်သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အတည်ပြုချက် ရယူရန် ဧရာဝတီက တောင်ငူခရိုင် ရဲစခန်းမှူးရုံးသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ အဆိုပါရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက အထက် အဖွဲ့အစည်း၏ ညွှန်ကြားချက် မရှိသဖြင့် ဖြေကြားပေးရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြန်လည် ပြောဆိုသည်။
တောင်ငူမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကလည်း ဧရာဝတီက ဆက်သွယ်သည့် တယ်လီဖုန်းကို လက်ခံဖြေကြားခြင်း မရှိပေ။
ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်အဖွဲ့သည် ရန်ကုန်မြို့မှ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်နေ့တွင် စတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီး ၉ ရက်မြောက်နေ့တွင် တောင်ငူမြို့အထိ ရောက်နေပြီဖြစ်ပြီး ထိုမှတဆင့် မည်သည့်မြို့သို့ ခရီးဆက်ရမည်ကို စဉ်းစားဆဲဖြစ်ကြောင်း အဖွဲ့ဝင် ဆရာတော် ဦးရက္ခဝံသက ပြောသည်။
အခုနှစ် ရန်ကုန်သင်္ကြန် ဘယ်မဏ္ဍပ်မှာ ထိုင်ကြမလဲ
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Western Star January 29, 2013 - 4:36 pm	They have the right to express how they feel about this civil war. If they are intercepted and detained by the authority, the wrath of the people will fall straight on the head of Thein Sein.
Reply	Tin Mg Aye January 29, 2013 - 5:48 pm	It`s perfect,update.So I like it.
Reply	swe htwe January 29, 2013 - 11:44 pm	Go ahead ! You are doing the right thing.
Reply	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 30, 2013 - 3:34 am	” …….. ဆိုသည့်သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အတည်ပြုချက် ရယူရန် ဧရာဝတီက တောင်ငူခရိုင် ရဲစခန်းမှူးရုံးသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ အဆိုပါရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက အထက် အဖွဲ့အစည်း၏ ညွှန်ကြားချက် မရှိသဖြင့် ဖြေကြားပေးရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြန်လည် ပြောဆိုသည်။”
အိမ်သာတက်တာ ရေသောက်တာကော အထက်အမိန့် စောင့်ရသေးသလား မေးပေးပါ ဧရာဝတီ။ သိချင်လို့ပါ။ သူတို့မှာ ဘာမှ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ မလုပ်တတ်ကြတော့ဘူးထင်တယ်။ သည်အဖြေပဲ ကြားနေရလို့။
Reply	Lightning January 30, 2013 - 5:54 am	It is not even two full years yet since Thein Sein formed quasi-civilian government but we have already seen that the history is repeating itself so soon. The junta tried to hide its color but the truth cannot be hidden forever. The beasts hid their tails between their legs for almost two years. At the end of their second year in office, their spots and stripes start clearly visible again. Let the people of the world be our judge.
The people who are marching and walking for peace to Laiza earn our respect and our support while the junta itself sets the Union on fire. The quasi-civilian government earns our disrespect. Curse be on them. Let the lightning strike them.